युट्युबमा छोटा राम्रा १० नेपाली फिल्म - A2Z Online Khabar A2Z Online Khabar
काठमाडौं, वैशाख २३ : छोटा फिल्महरू सिनेमा हलमा लाग्दैनन्। तर संसारभरका दर्शकमाझ छोटा फिल्म लोकप्रिय छन्। पछिल्लो समय प्रविधिको पहुँच र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महोत्सवहरूमा छोटा फिल्मले विशेष स्थान पाइरहेका छन्। युट्युब र भिमियोजस्ता अनेक डिजिटल माध्यममा छोटा फिल्मले प्रशस्तै दर्शक कमाएको छ।
युट्युबमा सबै नभेटिए पनि केही राम्रा छोटा फिल्म सजिलैसँग हेर्न पाइन्छ। विभिन्न महोत्सवमा चर्चा कमाएका, पुरस्कार जितेका बाहेक विषयगत विविधितालाई पनि ध्यानमा राखेर यो सूची बनाइएको छ। यो सूची छोटो फिल्मको संसार चियाउने सानो आँखट्झ्याठल मात्रै हो।
तिनले यो समस्याको हल कसरी खोज्लान्? घट्टेको रीत पुर्‍याएर दाहसंस्कार गरिएला वा अरू नै केही होला? थाहा पाउन हेर्नुस्, ‘मलामी’।
एक्लो घट्टेको मृत्युपछिको संकटलाई केन्द्रमा राखेर ‘मलामी’ले युद्धमा होमिएका वा विदेशमा धन कमाउन गएका युवा नहुँदा गाउँकाे दारुण अवस्था देखाएको छ। फिल्ममा मृत्युपछिसम्मै एक्लो घट्टेको कारुणिक अवस्था देखाई सामाजिक रुढी-परम्परामाथि दरिलो व्यंग्य गरिएको छ।
घट्टेको भूमिकामा चन्द्रदेव लिम्बू छन् भने अनुप बराल फिल्ममा ‘मृत्यु’ बनेका छन्। मृत्यु र शोकलाई केन्द्रमा राखिएको यो फिल्मको अन्तिम दृश्य रंगीन छ। श्यामश्वेत र रंगीन दुई फरक रङमार्फत निर्देशकले निराशा र आशालाई प्रतीकात्मक रूपमा देखाएका छन्।
सरूभक्तको ‘मलामी’ नाटकमा आधारित फिल्म ‘मलामी’ फ्रान्सको राष्ट्रिय टेलिभिजन फ्रँसबाट समेत प्रसारित थियो। ‘मलामी’ थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय महोत्सवमा प्रदर्शन भई पुरस्कारसमेत जित्न सफल फिल्म हो। युट्युबमै सुवर्ण थापाको अर्को छोटो फिल्म ‘छोरा’ पनि ‍हेर्न सकिन्छ।
हरेक दिन स्कुल जानुपर्ने धेरै बालबालिका घरको काम सकेर मात्रै स्कुल जान पाउने बाध्यtf हाम्रो ग्रामीण समाजको दैनिकी हो। घरधन्दाको कामको चापले उनीहरू स्कुल समयमा पुग्न नसक्नेदेखि ‘ड्रप आउट’ गर्नेसम्मका बाध्यता छन्।
फिल्म ‘तिर्खा’ ले यस्तै विद्यार्थीको कथा भन्छ। यसकी मूल पात्र प्रीति लामो बाटो हिँडेर घरमा पानी ओसार्छिन्। यो काममा उनका भाइ राहुलले पनि सघाउँछन्। तर घरको काम सकेर स्कुल पुग्न उनीहरूलाई धौधौ छ।
करिब पाँच मिनेटको छोटो–मीठो फिल्म बनाएका घिमिरेको ‘मामु’ फिल्म पनि युट्युबमा हेर्नुहोला। कोरोना संकट सन्दर्भमा बनाइएको ‘मामु’मा स्वास्थ्यकर्मी आमालाई कुर्दा कुर्दा थाकेकी सानी छोरीको गुनासो निर्देशकले मार्मिक रूपमा उतारेका छन्।
‘तिर्खा’ किम्फलगायत विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महोत्सवमा प्रदर्शित र पुरस्कृत फिल्म हो। बालसाहित्य लेखनमा सक्रिय भवसागर घिमिरेले यो फिल्म मार्फत मुख्य पात्रमा भएको ज्ञानको तिर्खा देखाएका छन्।
महिला पात्रका सूक्ष्म मनोविज्ञान सशक्त चित्रण गर्ने मामिलामा लेखक भवानी भिक्षु माहिर थिए। ‘टाइपिस्ट’ उनको त्यस्तै कथा हो। यही कथाबाट प्रेरित भई सुजित विडारीले ‘सावित्री’ निर्देशन गरेका हुन्।
पढाइमा रूचि नभए पनि परिवारलाई माया गर्ने बालपात्र राजु र उसको परिवारको कथा हो ‘बाबु’।
सामाजिक समस्यालाई ‘फेन्टासी’का सहारामा भन्ने यो चर्चित र प्रशंसित फिल्म हो। सन् २०१३ मा एकादेशमा सर्ट फिल्म फेस्टिभलमा प्रिमियर शो पाएको ‘द कन्टाजियस अपारियन्स अफ डम्बरे डेन्ड्राइट’ धेरै अन्तर्राष्ट्रिय महोत्सवमा भाग लिएको फिल्म हो।
सडकमा बाँच्न विवश बालबालिकाको दुःखलाई तीन पात्रको बालसुलभ प्रेममार्फत भनिएको यो फिल्मको सिनेमाटोग्राफी गज्जब छ। सम्पादन चुस्त छ। पात्रहरूको अभिनय पनि राम्रो छ। खासगरी मायाको भूमिकामा अस्मिता तामाङ स्वभाविक लाग्छ।
भीमसेन लामाको निर्देशन रहेको यो फिल्ममा विदेशी प्राविधिकको संलग्नताले यसको प्राविधिक पक्ष पनि बलियो भएको छ। १५ मिनेटको यो फिल्मले धेरै अवार्ड जितेको छ। युट्युबमा भीमसेन लामाको निर्देशनमा भेटिने ‘च्यान्टी’, ‘रुपिज फाइभ हन्ड्रेड’ लगायत फिल्म पनि राम्रा छन्।
बालमनोविज्ञान उजागर गर्ने यो फिल्ममा पांग्रो गुडाउँदै लखरलखर हिँड्ने बालकको कथा रोचक शैलीमा देखाइएको छ। बाटोमा भेटिने दिदीलाई ‘आइ लभ यू’ भन्दै हिँड्ने पुन्टे घरी एक्लै टोलाउँछ, घरी ऐनामा जुँगा बनाउँदै रमाउँछ। तर उसको दिमागमा सबभन्दा बढी पांग्राकै भूत सवार छ।
घना जंगलमा बाटो हराएका उनीहरूको यात्राको कथा यतिमै सकिँदैन। यसमा अरू थुप्रै रोचक घटना थपिँदै आउँछन्। ती घटनाक्रमबारे थाहा पाउन करिब पन्ध्र मिनेटको फिल्म ‘थर्स्टी’ हेर्नुहोला।
फिल्ममा प्रयोग गरिएका शब्दका कारण यो फिल्म अठार वर्षमाथिका उमेर समूहलाई सुहाउँदो छ। ड्रोनबाट खिचिएका हिमाल पहाडका लोभलाग्दा दृश्य, धुम्म परेको हुस्सु र कुहिरो अनि फिल्मको विधाअनुरुपको धमिलो रङ ‘थर्स्टी’ लाई हेर्नलायक बनाएको छ।
ज्याज फ्याक्ट्रीको निर्माण र अनिल न्यौपानेको निर्देशन रहेको यो फिल्ममा सरुक ताम्राकार र कुन्दन शाक्यको मुख्य भूमिका छ। निर्देशक अनिलका ‘निफ्टी’, ‘बब’ लगायत छोटा फिल्म युट्युबमा हेर्न सकिन्छ।
मुख्य पात्रले एक शब्द नबोलिकनै यो फिल्मले आफ्नो कुरा भन्छ। कथा सरल तर गम्भीर छ। यो यौन दुर्व्यवहारको विषयमा बनेको फिल्म हो। नेहा कलेज बसमै पढ्न गए पनि फर्कने बेला सार्वजनिक बस चढ्नुपर्छ। सार्वजनिक बसमा यौन दुर्व्यवहार भोगेकी उनी कलेज जाने भन्नेबित्तिकै झस्किने भएकी छिन्।
‘अबाउट अ गर्ल’ पनि किम्फ, निफ लगायत महोत्सवमा प्रदर्शित फिल्म हो। बढीमा पाँच मिनेटको यो फिल्मको निर्देशन र सम्पादन चुस्त छ। सन्देश स्पष्ट छ। मानसिक तनाव झेलिरहेकी पात्रको भूमिकामा निशा कार्कीले राम्रो अभिनय गरेकी छिन्। फिल्ममा उनीसँगै निरु खड्का र भोला शाह मुख्य भूमिकामा छन्।
नशा सेवन गर्ने युवाले बोल्ने खालकै भाषाशैलीमा तिल्गोरले आफ्ना साथी, गुरु र बुबाको ‘क्यारिकेचर’समेत गरेका छन्। उनको रोचक कथाशैली र अभिनयले दर्शकलाई बाँधेर राख्छ।